Cholesterol and food ကိုလက်စထောနဲ့ အစားအစာ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Cholesterol and food ကိုလက်စထောနဲ့ အစားအစာ
High Cholesterol diet (ကိုလက်စထော) များနေရင် မစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေ
1. Fried eggs ကြက်ဥကျော်
2. Cheeseburger ချိစ်ဘာဂါ
3. Macaroni and Cheese မက်ခရော်တနီ + ချိစ်
4. Ice Cream အိုက်စခရင်မ်
5. Rib-Eye Steak အသား စတိခ်
6. Muffin မတ်ဖင်
7. Seafood ပင်လယ်စာ
8. Fried Chicken ကြက်ကြော်
9. Liver အသည်း
10. Snacks သွားရည်စာ
Food to eat စားနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေ
1. Oatmeal, oat bran အုတ်စပါးနဲ့လုပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေ၊
2. High-fiber foods ဖိုင်ဘာများအစားအစာတွေ၊
3. Fish and omega-3 fatty acids ပင်လယ်ငါးနဲ့ အိုမီဂါ သရီး၊
4. Walnuts, almonds and other nuts အစေ့အဆံတွေ၊
5. Olive oil သံလွင်ဆီ၊
6. Margarines, orange juice and yogurt မာဂျရင်း၊ လိမ်မော်ရည်၊ ရေဂတ်၊
Foods to lower Cholesterol (ကိုလက်စထော) နည်းစေမဲ့ အစားအစာများ
1. Flaxseed နှမ်း
2. Oranges လိမ်မော်သီးအမျိုးမျိုး
3. Beans ပဲအမျိုးမျိုး
4. Garlic ကြက်သွန်ဖြူ
5. Soy ပဲပုပ်
6. Apples ပန်းသီး
7. Almonds မက်မွန် (ဗာဒံနဲ့ဆင်)
8. Cauliflower ပန်းမုံလာ
ကင်ဆာကို ကာကွယ်ခြင်း ဖောရောင်ခြင်းနှင့် ကင်ဆာ ဖြစ်စေသော tumor cell များ စတင်ဖြစ်ပေါ်ချိန် ရောင်ရမ်းမှုနှင့် ကြီးမားလာစေသော နှုန်းကို လျော့ချ ...